Isiteshi 8 - I-Resi Apartment - I-Airbnb
Isiteshi 8 - I-Resi Apartment
Aurisina, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Monica izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Sizokukwamukela endlini eyakhiwe eminyakeni engaphezu kwengu-100 eyedlule ngugogo omkhulu u-Pina, eyakhiwe kusetshenziswa amatshe e-karstic egumbini "lomuntu siqu" elakhiwe ngemuva kwengadi.
Ngeminyaka yo-1970, indlu endala ithathe isithombe sanamuhla futhi manje, ngemva kokulungiswa okusha, yanqunywa ukubuyela ekuqaleni ngokuzinikela esitezi sokuqala ekwamukeleni izivakashi.
Ukusuka endaweni yokungena eyinhloko ungena emzileni ovamile obheke ikamelo le-Delia, ikamelo elinegumbi lokugezela langasese elinamakhishi, i-Pina, ikamelo elinendlu yokugezela, nefulethi, i-Resi, enekamelo lokulala, indawo evulekile enekamelo lokuphumula nekhishi, igumbi lokugezela langasese nethala elikhulu.
Ungenza ifulethi lixhunywe nekamelo le-Pina noma uqashise yonke indawo yaphansi kuze kufike kubantu abangu-12
I-Aurisina yidolobhana elincane e-Karst, isendaweni ephakathi nendawo futhi ikuvumela ukuba ufinyelele ngokushesha olwandle, i-Karst nedolobha.
Iseduze nomgwaqo oyimoto futhi uma uthanda ukuhamba, ngeke kudingeke uhambise imoto yakho ukuze ujabulele ukubuka indawo ezungezile. Ungahamba uye enkabeni yedolobhana ngamabhikawozi, ama-bar, ama-pizzerias, ama-pub, (ngezinkathi zonyaka) izindlu zasepulazini, ama-hairdresser, amabhange, amahhovisi okuposa kanye nezitolo ezincane zezitolo.
Isiteshi8 sinikeza ithuba lokuchitha iholide elithulile ngokuxhumana nemvelo.
Ifinyeleleka kalula ngenxa yezokuthutha zomphakathi ezivumela ukuxhumana ukuya nokubuya edolobheni lase-Trieste.
Indawo ekahle yokuqala yokuvakashela izindawo ezibaluleke kakhulu zokuvakasha eSifundazweni, e-Trieste, e-Grado, e-Aquileia, e-Palmanova, e-Gorizia nase-Udine noma ngokuvakashela e-Slovenia eseduzane, ogwini lwase-Istrian, e-Ljubljana, emihumeni yase-Postumia noma e-San Canziano noma ngokuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba emizileni elula ukuya e-Karst.
Awukwazi ukukhohlwa ulwandle, i-Sistiana, kanye netheku layo, ikuvumela ukuthi ujabulele ulwandle ohlotsheni lomndeni noma i-Beach Club ekhethekile ye-Portopiccolo.
Ikamelo lingaphakathi kwendlu esihlala kuyo ngakho kuzoba lula ukutholakala noma nini lapho uludinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Aurisina namaphethelo